သင်ဝယ်ယူနိုင်သောအကောင်းဆုံး eReader, ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။ | eReaders အားလုံး
အကောင်းဆုံး eReader လိုချင်ပါသလား ဒီနေ့စျေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ ၀ ယ်နိုင်တဲ့အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များစွာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာပဲ eBook တစ်ခုဝယ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ နှင့်မည်သူမဆိုအောင်မြင်မှုနှင့်အတူလုပျနိုငျကွောငျး။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ဤဆောင်းပါးအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံး eBook ကို ၀ ယ်ရန်မကြိုးစားဘဲညွှန်ကြားချက်ပေးလိမ့်မည်။
သငျသညျစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ereader ကိုဝယ်ပါကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာများနှင့်သင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအကောင်းဆုံးအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်ကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားများစွာအထောက်အကူပြုမည့်အရာအားလုံးကိုမှတ်သားရန်၊ ဘောပင်တစ်ချောင်းနှင့်စက္ကူသို့မဟုတ်သင့်တက်ဘလက်ကိုယူပါ။ သင်အမှတ်ရလိုလျှင်ဤဇယားကိုကြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး - စျေးနှုန်း
ယခု Kindle Oasis ကို ... ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ... ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
မီးမောင်း	 အမေဇုံမှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအထူးအမှုနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်း။ Kindle ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပုံစံ။	 ဤသူသည်အဘယ်သူမျှမ၌တည်ရှိ၏ Kindle ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးနှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်ညှိစျေးနှုန်း၎င်း၏စပ်လျဉ်းရောင်းချ 1 ။	 ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ePub ကိုထောက်ပံ့သည်။ ပြီးတော့ရေကိုခုခံတွန်းလှန်တယ်။
ကောငျး	 စာမျက်နှာများကိုဖွင့်ရန်ခလုတ်များ၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ အံ့သြဖွယ်ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အတူအလွန်ပေါ့ပါးကိရိယာ။ ၎င်းတွင် WIFI option သို့မဟုတ် WIFI + 3G ပါရှိပါသည်။	 ၎င်းတွင်ယနေ့စျေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်သော ebook ဖတ်ရန်လိုအပ်သည်မှာအလင်း၊ Wi-Fi၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ ကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်တို့ဖြစ်သည်။	 ၎င်းတွင် Kindle ရှိနိုင်သည့်အရာများသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။ သို့သော် ePub မှတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသောအရာသည်စာဖတ်သူများစွာအတွက်အရေးကြီးသည်။
ဆိုး	 တစ်ခုရှိသည့်အရာအားလုံးအတွက်၎င်းဖန်သားပြင်သည်အလွန်သေးငယ်ကြောင်းသတိပြုမိနိုင်သည်။ ဒုတိယအားနည်းချက်ကတော့ဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းပဲ။	 အချို့သောရိုးရာစာဖတ်သူများသည်အီလက်ထရောနစ်စက္ကူများ၌အသုံးမပြုကြသေးပါ။ မှန်တယ်။	 သင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းဘက်ထရီသည်ကြာရှည်မခံပါ။ ပြီးတော့ Kindle Paperwhite နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်စျေးကတော်တော်လေးစျေးကြီးတယ်။
နိဂုံး	 သင်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းမစဉ်းစားဘဲစိတ်ချရသော ebook စာဖတ်သူတစ်ယောက်ရှိလိုပါက Kindle Oasis သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။	 သုံးစွဲသူအကဲဖြတ်သူ ၆,၃၀၀ ကျော်အနက် ၄.၅ / ၅ ရမှတ်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။	 Kindle ကိုအစားထိုးရန် ebook ဖတ်ရှုသူကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမကြိုက်ကြပါ။
1 အကောင်းဆုံး eReaders များ
1.2 အခြေခံ Kindle
1.3 အိုအေစစ် Kindle
1.5 စွမ်းအင် eReader Pro
2 အကောင်းဆုံး eReader ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
2.1 EReader display
2.3 ဝိုင်ဖိုင်သို့မဟုတ် 3G ဆက်သွယ်မှု
2.4 ဒီဇိုင်းနှင့် ergonomics
ကျွန်ုပ်တို့သည် eBook တစ်ခုကိုဝယ်ယူရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အဓိကအချက်အချို့ကိုသိရှိပြီးသည်နှင့်၊ eReader ၏အကောင်းဆုံးမေးခွန်းဖြစ်သောကန ဦး မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့အချို့ပြန်လည်သုံးသပ်သွားကြသည် အကောင်းဆုံး eReaders များ ငါတို့စျေးကွက်ထဲမှာရှာတွေ့နိုင်တယ်၊
လူများစွာအတွက် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအီလက်ထရောနစ်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုပစ္စည်းတစ်ခုတည်းတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်မဆိုဈေးသက်သာစွာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမ့်ချအမြင်၌တည်၏ ကျနော်တို့နီးပါးပြီးပြည့်စုံသော device ကိုရင်ဆိုင်နေရကြသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း Amazon eReaders များသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် eBook format ကိုအသုံးပြုသည်။ အရာများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အခြားသူများတွင်မူဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းလောကတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်မှုကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
နောက် Kindle Paperwhite ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
အက္ခရာ e-paper နည်းပညာနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံဖတ်နိုင်သောအလင်း၊ ၃၀၀ dpi၊ အမြင့်ဆုံး font နည်းပညာနှင့်မီးခိုးရောင်ချိန်ခွင်ပါသော ၆ လက်မမျက်နှာပြင်
အရွယ်အစား: ၁၆.၂ စင်တီမီတာ x ၁၁.၅ စင်တီမီတာ x ၀.၇၆ စင်တီမီတာ
Bookerly ဖောင့်သည် Amazon အတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပြီးဖတ်ရန်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
အသုံးပြုသူများသည်စာအုပ်များအားတစ်ကြောင်းခြင်းဖြင့်လှန်လှောကြည့်ရှုခြင်း၊ အခန်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်စာဖတ်သည့်အချက်များဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲစာအုပ်၏အဆုံးအထိခုန်နိုင်သည့် Kindle Page Flip reading လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်သည်။
Kindle Paperwhite သည်လူအများအတွက်သေချာသည် စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး eReader.
နောက်ဆုံးတော့ငါတို့မေ့လို့မရဘူး ယခုအလင်းနှင့် Kindle ...ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များကိုအလွန်နိမ့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ဖတ်နိုင်ရန်နှင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘဲယူဆနိုင်သည့်အကြောင်းနှင့်လိုအပ်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ eReader ထံမှအလွန်အမင်းမျှော်လင့်မထားသင့်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံကျသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုဖတ်ရန်ခွင့်ပြုလျှင်၎င်း Kindle သည်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားဒီအခြေခံ Kindle ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များပါ၏
1 GHz ပရိုဆက်ဆာ
Cloud သိုလှောင်မှု - Amazon နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
အကောင်းဆုံး eBook ကိုဝယ်ပါ ၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးသင့်အားပေးခဲ့သောအကြံဥာဏ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသောပုံစံများသည်သင့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး e-book ကဘာလဲ။ သင်စျေးသက်သက်သာသာသာရလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည် စျေးပေါသော e-book.
El ယခု Kindle Oasis ကို ... ၎င်းသည် eReader ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောအခြားဒီဇိုင်းနှင့်အခြားမည်သည့်စက်ပစ္စည်းထက်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်။ အမေဇုံမှပြုလုပ်ခဲ့သည့်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောအနှုတ်လက္ခဏာအချက်မှာ၎င်း၏စျေးနှုန်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပုံမှန်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုထက် ပို၍ မြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမှာပါ ဒီ Kindle အိုအေစစ်၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ;
မျက်နှာပြင် - ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိအက္ခရာ e-papper နည်းပညာနှင့်ထိတွေ့မှု၊ ထိတွေ့မှု၊ resolution မှာ7x 1440 နှင့်တစ်လက်မလျှင် ၃၀၀ pixels ဖြစ်သည်။
ယခု Kindle Oasis ကို ...
နောက်ထပ်စျေးကွက်ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတိုးတက်ခဲ့ပြီး Amazon နှင့်တူညီသောအဆင့်ရှိ Kobo ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် Amazon ၏ကျော်ကြားမှုနှင့်ကျော်ကြားမှုမရှိပါ။ The Kobo Aura H2O အနက်ရောင် ဒါဟာ Kobo ဟာအရာရာကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေတာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ဒီအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေရဲ့ထူးခြားချက်အချို့ပါ ၀ င်ပြီးဒီဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းထက်ပိုပြီးခံစားနိုင်မှာပါ။
Resolution 6,8 x 1430 Pixels ရှိသည့် ၆.၈ လက်မဖန်သားပြင်၊ Letter Technology နှင့် 1080 ppi
1.700 mAh Li-On ဘက္ထရီ
စွမ်းအင် eReader Pro
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ပေးသော eReader ကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၎င်းသည်ပိုမိုနိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လည်းဝယ်ယူနိုင်လျှင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ Energy Sistem eReader ...စပိန်ကုမ္ပဏီ Energy Sistem မှထုတ်လုပ်သည်။
တစ်ဦးနှင့်အတူ ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်း၊ ပေါင်းစပ်ထားသည့်အလင်းနှင့်၎င်းတွင် Android ဗားရှင်း 4.2.2 ရှိသည် operating system တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဒီကိရိယာသည်ဒီဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းလောကသို့ ၀ င်ရောက်လာသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစွမ်းအင် eReader Pro ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပြသပါမည်။
အရွယ်အစား 160 x 122 x ကို 10 မီလီမီတာ
၆ လက်မအီလက်ထရောနစ်မင် Touch မျက်နှာပြင်သည် Resolution ၇၅၈ x ၁၀၂၄ Pixel ရှိပြီး ၂၁၂ dpi နှင့်မီးခိုးရောင်အဆင့် ၁၆ ခုရှိသည်။ ၎င်းတွင်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း။ ရသောအလင်းရှိသည်
ARM Cortex A9 1.0Ghz dual-core ပရိုဆက်ဆာ
512 MB RAM ကို
၈ GB GB သိုလှောင်မှုပမာဏကို microSD ကဒ်မှ ၆၄ GB အထိချဲ့နိုင်သည်
2.800 mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီ
Android 4.2.2 Jelly Bean လည်ပတ်မှုစနစ်
အကယ်၍ သင်သံသယရှိနေသေးပါက၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုစတင်ခံစားရန်အတွက် eBook တစ်ခုကိုဝယ်ယူသောအခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသမည်။
အကောင်းဆုံး eReader ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို၊ ဒီဖန်သားပြင်ဟာဘယ်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်ရဲ့အခြေခံသွင်ပြင်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လဲ၊ အဲဒါကနေဖတ်တာဟာနေ့တိုင်းအချိန်ကုန်ခံဖို့ပါ။ ဤအတွက်၊ သင်၌aမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် သင့်တော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မျက်နှာပြင်၊ အကောင်းဆုံး resolution နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအသင့်ပါရှိသည်တစ် ဦး ကတည်းကဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေစွာဖတ်ခြင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမျက်ရည်မကျစေခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအီလက်ထရောနစ်မင်များဖြင့်အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်များဝယ်ယူသည့်အချိန်ကိုကြည့်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ E-ink ပုလဲနည်းပညာသည်စျေးကွက်တွင်အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှိအထင်ရှားဆုံးသောပစ္စည်းအများစုတွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေစွာဖတ်ရှုနိုင်ပြီးဘက်ထရီလည်းပါသည့်အတွက်ဤရှုထောင့်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အခြားနည်းပညာများနှင့်ပိုမိုသက်တမ်းရှည်သည်။
မျက်နှာပြင်သည်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်၏အဓိကဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်သည့်အခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး eReader.
အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်များတွင်ဘက်ထရီသည်များသောအားဖြင့်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များတွင်ဒုတိယနေရာဖြစ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်မှင်ကြောင့်၎င်း၏ကြာချိန်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုင်းတာသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်ပါ။ သင့်စက်၏ဘက်ထရီသည်အနည်းဆုံး (၈) ပတ်ကြာအောင်ပြုလုပ်သောထုတ်လုပ်သူအားလုံးပြုလုပ်သောကြော်ငြာကိုအလွန်အားမကိုးဘဲ ကျနော်တို့ဘက်ထရီ၏ mAh အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုစစ်ဆေးရပေမည် အင်တာနက်ပေါ်မှာ
ထို့အပြင် eReader သည်မည်သည့်အားသွင်းကြိုးအမျိုးအစားကိုလျင်မြန်စွာအားသွင်းပါကအချိန်တိုအတွင်းအားသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်ကိုစစ်ဆေးရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ e-book နှင့်ခရီးသွားလျှင်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
ဖန်သားပြင်နှင့်အတူဘက်ထရီသည်အခြားမျက်နှာအသွင်အပြင်တစ်ခုဖြစ်သည် အကောင်းဆုံး eReader ကိုရွေးချယ်ပါ.
ဝိုင်ဖိုင်သို့မဟုတ် 3G ဆက်သွယ်မှု
သုံးစွဲသူများအတွက်ဤသည်မှာအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော option တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအနည်းငယ်အတွက်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါပါ eReader တွင် WiFi သို့မဟုတ် 3G ဆက်သွယ်မှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုက်များကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည် သို့မဟုတ်ငါတို့မိုlibrary်းတိမ်၌ပါသောငါတို့စာကြည့်တိုက်မှပင်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ eReader အသစ်သည်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားမျှမရှိပါကဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်နိုင်ချေများမှာများစွာလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ဒါဟာငါတို့ရှာလျှင်ရှင်းပါတယ် အကောင်းဆုံး eBookဆက်သွယ်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံရမည်။
နောက်ခံတွင်ဒီဇိုင်း (သို့) ergonomics စသည့်ကဏ္aspectsများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း ကျနော်တို့ကအလွန်သိသာထောင့်ရှိသည်ပါဘူးကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် သို့မဟုတ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအဆင်ပြေစွာဖတ်ရန်ခွင့်မပြုပါ
၎င်းသည်ပစ္စည်းကိရိယာကိုမရယူမီစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုတွင်၎င်းသည်လက်၌အဆင်ပြေကြောင်းစစ်ဆေးရန်နှင့်စာဖတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်း၊ စာမျက်နှာတိုင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်သည့်အရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စကားလုံးအချို့ကိုရှာဖွေ။ နားလည်နိုင်ရန်အနီးအနားတွင်အဘိဓာန်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သော e-book များတွင် built-in အဘိဓာန်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်အဘိဓါန်များနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လျှင်သင်ဖတ်သည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုအသုံးပြုပါကသင်ဝယ်မည့် e-book တွင်ဤလုပ်ဆောင်ချက်ရှိမရှိကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။
မင်းဒါကိုဝေးဝေးရောက်သွားပြီးမင်းမှာသံသယရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်၊ ဒီ link သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သော eReaders တစ်ခုရွေးရန်သင်၌ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » အကောင်းဆုံး eReader
သင်ရက်စက်စွာလျစ်လျူရှုထားသည့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော PocketBook ကဲ့သို့ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်ချက် - Android စာဖတ်သူတွေကပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပေမယ့်၊ အနည်းဆုံးတော့ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူအတွက်စာဖတ်ဖို့အတွက်သာရည်ရွယ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုထက်အသုံးပြုရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည် (ပြီးပြည့်စုံမှုနည်းသည်) ။
kindle သည်ပုံစံအားလုံးကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ဟုဆိုပါစို့၊ Tolstoy ၏စစ်ပွဲနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကဲ့သို့သောစာအုပ်သည် epub မှ Azw သို့ mobi သို့ ၂၃ စက္ကန့်လောက် caliber နှင့်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ PC ပေါ်တွင်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၌ amd 23- ဟောင်းရှိသည်မှာမှန်ပါသည်။ အဓိက
Kindle ကိုသတိထားရမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာခေတ်မမီတော့တဲ့ပရိုဂရမ်တွေလို့ထင်ရလို့သူတို့နှစ်နှစ်တာအတွက်မလွယ်ကူဘူး။ တစ်နှစ်အကြာတွင် (သူတို့ပေးသောအာမခံချက်အဆုံးသတ်သွားလျှင်) သူတို့သည်အမြဲတမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းမခံရမချင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြproblemsနာများစွာကိုပေးလေ့ရှိသည်။ "kindle lock" အတွက်အင်တာနက်ကိုရှာကြည့်ပါ။
ပြောင်းပြန်နောက်ကွယ်မှလုပ်ဆောင်နိုင်သလား? AZW မှ EPUB သို့မည်သည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပထမ ဦး ဆုံးမျိုးဆက် Kindle ရှိသည်၊ ခရစ်စမတ် ၂၀၀၇ တွင် ၀ ယ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ခရစ်စမတ်ကို ၀ ယ်ခဲ့သည့် Kindle4နှင့်နောက်ဆုံးတွင် ၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Kindle paperwhite နှစ်ခုကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။
မိသားစုတစ်စုလုံးအနေဖြင့်အသုံးပြုမှုကိုအထူးတလည်အသုံးပြုကြပြီး paperqwhites များထဲမှတစ်ခုသာ Amazon မှဖုန်းပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပျက်ဆီးခဲ့ရသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာ system update တစ်ခုပေါ်လာပြီးပြproblemsနာမရှိတော့ဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူသောအခြားစာအုပ်များ (Papyre နှင့်၎င်း၏မျိုးဆက်မှအခြားသူများ) သည်အဆုံး၌အလုပ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် Kindle ဖြင့်အစားထိုးခြင်းအားဖြင့်အစိမ်းရောင်သို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ကိစ္စတစ်ခုအလွန်နည်းပါးသောအခြေအနေမျိုးတွင် kindle သည်အမြဲတမ်းပျက်သွားတတ်သည်။ ပြproblemနာကိုများသောအားဖြင့်လျှင်မြန်စွာဖြေရှင်းတတ်သည်။ ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ယနေ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအများစုသည်ရိုးရိုး reboot ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်ပိတ်ဆို့ခြင်းပြcanနာရှိနိုင်သည်။
Alberto Lozano ကိုပြန်ကြားပါ
pdf ဖတ်ဖို့အကောင်းဆုံးကဘာလဲ ငါ့မျက်ခုံးကြားက Kobo Aura အသစ်ကိုငါရခဲ့ပေမယ့် YouTube မှာစမ်းသပ်မှုတွေတွေ့ခဲ့ရတော့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။
သူတို့ကသိပ်မများဘူး။ ငါသည်လည်း Kindle3နှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီးသင်၏အမြင်နှင့်လည်းအလားတူပင်။ ယခုအပတ်အထိကျွန်ုပ်အားရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားသည်၊ ၎င်းကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်ခြင်း၊ အထူးအသုံးမပြုခြင်းမရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတစ်လဖတ်ကောင်းဖတ်နိုင်သည်။ အနိမ့်ပြင်းထန်မှု၏။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေသောအခါ၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသောအလားတူဖြစ်ရပ်များကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအတော်များများအပါအ ၀ င်၎င်းကိုပြုပြင်ရန်အထူးပြု။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို "ရှားပါး" သို့မဟုတ် "သတ်သတ်မှတ်မှတ်" ဖြစ်ရပ်များဟုမထင်ပါ။ Kindles ထက်အခြားမည်သည့်လူကြိုက်များသောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွင်မဆိုရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်သေခြင်းတရားကိုသင်တွေ့ရှိရသည်။ ငါတွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်သတ္တုတွင်းများကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်များပြိုကွဲသွားခြင်းကြောင့် Amazon's Kindle ၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ အခုအချိန်မှာငါဘာမှပြhasနာမရှိသေးဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဘက်ထရီအသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်ပြီးပြthatနာဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်ဖိအားပေးခံရပါက၎င်းသည် Kindle ထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်း၏အရည်အသွေးသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ငါထင်တယ်အခုတော့ Whitele Paperle kindle ၏စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအချိုးကိုကျော်လွှားရန်ခဲယဉ်းသည်။ အမှန်မှာအစမှပုံစံအားလုံးကိုဖတ်။ မရနိုင်ပါ။ သို့သော် Calibri ကို အသုံးပြု၍ Kindle နှင့်လိုက်ဖက်သောပုံစံသို့အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင် formats, အသံကိုလည်းမေ့လျော့မသာ။ စာဖတ်နေစဉ်အော်ဒီယိုစာအုပ်သို့မဟုတ်တေးသီချင်းကိုနားထောင်ရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်ပါ၊ အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခု၊ ဂီတအတွက် mp3 ဖွင့်စက်နှင့်စာအုပ်များအတွက်ဖတ်ရှုရန်လိုအပ်ပါကပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖွစျပါသညျ။ ereader များများစားစားရှိတာမို့တက်ဘလက်နဲ့အရာအားလုံးကိုပေါင်းစည်းပေးတယ်
Silvia Trachcel ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ ebook papyre 6.1 ၏ဘက်ထရီကိုအားသွင်းရန်ပြproblemsနာများရှိပြီးမျက်နှာပြင်ကိုညွှန်းကိန်းတွင်စစ်ဆေးထားပြီး၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ယူဆောင်လာနိုင်မည်ကိုသိလိုပါသည်။
Silvia Trachcel အားပြန်ကြားပါ
ငါ pdf (ရုပ်ပုံအဖြစ်မဟုတ်ဘဲစာသားအဖြစ်) နှင့် epub ဖတ်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင် audiobooks ၏ရွေးချယ်မှုရှိခွင့်ပြု e- စာဖတ်သူကိုတတ်နိုင်သမျှစျေးပေါ, ဝယ်ချင်တယ်။
ငါဘာမှမလုပ်ပဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုဖတ်ပြီးပေမယ့်လူတွေရဲ့မှတ်ချက်ကနေဘာမှမရှင်းဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် Kindle ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများက၎င်းသည်၎င်းတွင်ရှိသည့်စျေးနှုန်းနှင့်၎င်းသည် pdf နှင့်၎င်းကဲ့သို့ဖတ်ရန်အလွန်ကောင်းသည်ဟုဆိုသော်လည်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ပြproblemsနာများစွာကိုဖော်ပြသည်၊ ၎င်းသည် pdf များသည်ပုံများအဖြစ်သာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ထွက်ခွာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည် သေးငယ်တဲ့အရာတစ်ခုခုဖတ်နေတာကိုကြည့်ပါ (သို့) ညာဘက်ကိုသွားပြီးစာမျက်နှာကိုပုံနဲ့ကိုက်ညီအောင်ထားပါ။
ငါလည်း TAGUS ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့က Amazon စာအုပ်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ထင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာအရမ်းကိုဆုံးရှုံးသွားပြီး၊ ငါဟာစာအုပ်များစွာနဲ့အတူအမြဲတမ်းတင်ထားတဲ့အတွက်စာဖတ်သူကိုလိုချင်တယ်။ ')
စာဖတ်သူမှသင့်အား PDF's နှင့်ကျေနပ်လောက်သောရလဒ်များကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ PDF မှ ePub ကို PC မှကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ငါအလားတူအရာတစ်ခုခုရှာဖွေနေသည်နှင့်နောက်ဆုံးတော့ငါ Mars de Boyue Laptop ကိုရွေးချယ်မည်ဟုထင်သည် Booxes အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်စျေးကအရမ်းမြင့်တယ်။
အဘယ်ကြောင့်ပြုလုပ်သော e-reader များအားအကဲဖြတ်မှုတိုင်းတွင်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်အများဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ကို Kindle နှင့်မကိုက်ညီသည့် e-pub format ဖြင့်ဖော်ပြသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သနည်း။
အဘယ်ကြောင့်ထိုကြောင့်မထင်ရှားသနည်း၊ သူဝန်ခံသည့်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည့် Amazon သည်ရောင်းချသော kindle format ကိုသာဝယ်ယူရန်ဆွဲဆောင်ရသည်၊ မည်သည့်အရာသည်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မရနိုင်သနည်း။ အခမဲ့အင်တာနက်လား
လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများကို Caliber ဆိုက်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်က e-pub တွင်တိုက်ရိုက်ဖတ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်အဘယ်ကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်နည်း။
ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေခံအားဖြင့် Caliber က eubs format နဲ့ ebook format ကို mobi or azw3 format နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်။ ဒါက Kindle လက်ခံတဲ့။
ဒါကြောင့် Caliber နဲ့အတူ Kindle format ပြpartနာဟာ "solved" ဖြစ်နေလို့ပါ။